WARARKA BARAAWEPOST Isniin 28 may 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Taliyeyaasha ciidamada Booliska,Militeriga iyo nabadsugidda oo maanta booqday degmada Afgooye
Saraakiil ka tirsan dowladda FKMG ah ee Soomaaliya oo ay horkacayeen Taliyaha Ciidamada XDS s/gaas C/qaadir Sheekh Cali Diini, Taliyaha ciidanka Booliska S/Gaas Shariif Sheekhunaa Maye, agaasimaha Hay�adda Nabad sugidda Axmed Cali Fiqi iyo mas�uuliyiin kale ayaa Maanta kormeer ku tagay degmada Afgooye iyagoo halkaas kula hadlay wariyeyaal ka socday Warbaahinta.
Taliyaha ciidanka XDS, S/Gaas C/qaadir Sheekh Cali Diini aya warbaahinta u sheegay in ciidamada dowladda iyo Kuwa AMISOM ay sii wadayaan howlgalada ka dhanka ah Al-qaacidda ilaa inta dalka oo dhan laga xoreynayo.
Sidoo kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed S/Gaas Shariif Sheekhuna Maye oo isna hadal ka jeediyay goobta ayaa waxa uu xusay in shabaab aysan rajo dambe ka qabin inay mar kale ku soo laabtaan deegaannadii ugu dambeeyay ee laga xoreeyay, isla markaana ay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda.
Dhamaan mas�uuliyiinta ka hadashay goobta ayaa baaq u diray dhalinyarada ay marin habaabiyeen kooxda shabaab kuwaas oo haatan ku dhuumaaleysanaya deegaanno yar ah oo ka tirsan gobolka Sh/Hoose.
Ciidamada nabadsugidda iyo kuwa booliiska oo ay weheliyaan qaybo ka tirsan Militeriga iyo ciidamada Nabadsugidda ee loogu talagalay la dagaalanka iyo ka hortagga argagaxisada ayaa maanta Howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana Lagu soo qabqabtay boqolaal qof oo looga Shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-qaaciddada Soomaaliya ka sameeyay degmada Afgooye.
Howlgalka ay maanta sameeyeen ciidamada dowladda ayaa Waxa ay ka bilaabeen degmada Afgooye waxa ayna gudaha u galeen suuqa degmadaasi iyagoona guryaha iyo dukaamda mid mid u baarayay.
Sidoo kale ciidamada DFKMG ayaa howlgalo kuwaa la mid ah ka fuliyay degaamada kala ah Ceelasha Biyaha,Xaawo Cabdi,Lafoole iyo Carbiska
Dadka la soo qabqabtay ayaa waxay ahaayeen kuwo looga shakiyay in ay ku lug leeyihiin maleeshiyadka shabaab ee goobahaas laga saaray, waxaana maxaabiista dhamaantood lagu xiray xabsiga degmada Afgooye.